Ma noqon karnaa "maqaarka" wax lagu caddeeyo? - Mu'asasada Afrikhepri
Ma u noqon karnaa "iftiinka maqaarka"?
Ma u noqon karnaa “maqaarka” wax nadiif ah?
Maqaarkaaga khafiifi. Sidee xitaa loo tirtiri karaa iyada oo aan la soo jiidan xanaaqa afro-feminists, maqaarka, cilmu-nafsiga ama xitaa gabdhaha Nappy? Ka fog in ay ahaato qof Afrikaan ah, lacag laynta waa dhaqan sidoo kale saameeya malaayiin haween Aasiya ah (Hindiya ilaa Japan). Farxad ahaan, tani waa mowduuc aan toos ahayn oo loogu talo galay kuwa isticmaala kareemadaan, saabuunnada iyo irbado kale!
Melanin iyo tyrosinase: wadnaha pigmentation.
Muxuu maqaarku mugdi u yahay? Waxay kujirtaa melanocytes ee maqaarka, melanosomes-ka waxaa kujira badarka melanin, midab madow. Ficilka enzyme, tyrosinase, melanosomes-ka waxaa loo diraa melanocytes ilaa keratinocytes halkaasoo ay midabeeyaan lakabyada sare ee maqaarka. Maqaarka madow, ee hidaha loogu talagalay in lagu beddelo deegaan qorrax leh, waxaa kujira melanosomes tiro iyo cabbir badan. Qulqulka qallalan ee melanin wuxuu ka ilaaliyaa unugyadeena waxyeelada waxyeelada leh ee fallaaraha qorraxda ee UV.
caddeeyo maqaarka, waxa uu hakiyo geedi socodka melanogenesis by xakamaynayaan tallaabada of tyrosinase dhex mélanobloquants sinji sida Hydroquinone (mamnuucay in Europe iyo, sii kordheysa, in Africa iyo sidoo), ee aadic acid, azelaic acid, glabridin, arbutin ...
Muxuu jidhkaaga u miiray?
Sababta ugu weyn ee daliishaday ayaa ah arrinta xiisaha leh. Xaqiiqdii, dhinaca kale, qaabka guud ahaan qurxinta baahsan ee dumarka waa midka dumarka maqaarka leh oo caddaalad leh. Dhanka kale, maqaarka madow badanaa wuxuu leeyahay dhibco dhibco sare ah oo aan rabno inaan yareyno si aan u waafajino qaabkiisa.
Intaas ka dib, waxaa jira gaar ahaan sabab bulshadeed oo ah rabitaankani inuu ku faafo maqaarka. In a macno post gumayste hore iyo takoorka isirka, waxay leeyihiin maqaarka cad (iyo / ama siman iyo / ama degay iyo / ama indhaha oo iftiin timaha) waxa uu la xidhiidhaa guusha bulshada, xirfad iyo jacaylka.
Gariig ilaa inta aad maqaarkaaga uga tageysid.
Si kastaba ha noqotee, isticmaalka kiriimka iftiiminta siyaabo badan ayaa halis ugu jira.
Khataraha Caafimaadka: shaqada ka hortagga maqaarka ayaa la saarayaa. Waxaa jira kiisaska kansarka maqaarka ee haweenka Afrika. Cuntada ku jirta cortisone waxay sababi kartaa cadaadis dhiig oo sarreeya, kelyo la'aan, sonkorow, carqaladeynta wareegga dhiigga ama dhibaatooyinka lafaha ...
Natiijada badanaaba aad u cakiran: hoos u dhac joogto ah "in confetti", sicir barar (wajiga, gacanta, xusulka, jilbaha), calaamadaha fidsan, finanka, timaha jirka, urinta jirka
Labada tiirsane laba: Maqnaanshaha joojinta codsiga alaabta. Dhinaca kale, waxaa jira ku tiirsanaan jireed oo ku xiran corticosteroids oo xabsiga keena dareemo walaac, niyadjab, jahwareer isdaba joog ah. Dhanka kale, joojinta maqaarka si ay dib-u-dajin ku dhawaad ​​habeen dambe.
Arrimaha maskaxda iyo aqoonsigaDumarka isticmaala alaabta iftiinka ah mararka qaarkood waxay dareemaan dambiile maxaa yeelay miirashada waxay la mid tahay inay u sheegto bulshada in ay ka xishoodaan inay yihiin Madow. Waxay dareemayaan inay dhabarka u jeedaan cidda ay yihiin, qoysaskooda, xididadooda, dhaqankooda. Qaarkood, si ay u dhex galaan, tagaan ilaa inta ay wax ka cunaan carruurta yaryar! Inkasta oo dhammaan dadaalkan "dadaalada" ay ku beddelaan midabkooda maqaarka, weli waa Madow.
kharashka : Miisaaniyadda loo qeybiyay iibsashada alaabtu ma aha mid aan loo dulqaadan karin.
Qaadashada sharciga guud ee mamnuucida ...
Sidaa darteed, marka la eego khatartaas oo dhan, maxaad u mamnuucday alaab-celinta oo dhan? Dalka yurub, Mareykanka iyo Afrika, sharciyadu waxay leeyihiin dhowr sano oo la mamnuucay isticmaalka nalalka firfircoon ee firfircoon, gaar ahaan hydroquinone. Si kastaba ha ahaatee, wali waxaa laga helaa badeecooyin badan oo ay ku jiraan baako yar oo ku siinaya macluumaad yar (hantida, diirada, asalka ...).
Marka la eego mamnuucid guud, khubarada qaarkood waxay ku doodaan in tani ay noqon karto mid wax tar leh. Tani waxay ku boorineysaa macaamiisha inay alaab khayaano ah ama diyaar garow farshaxan oo jaban sida Javel oo ka sii daraya!
... ama dhinaca dhaqanka ay kormeerayaan dhaqaatiirta?
Inta u dhexeysa jawaabta dhabta ah ee daaweynta iyo qaybta suuqyada suuqa, dhakhtarka maqaarka iyo takhaatiirta takhasuska leh ayaa sidoo kale naftooda uqaabilsan sidii lataliye macquul ah oo ku saabsan arrinta maqaarka cad.
Waxay marka hore leeyihiin kaalin bogsiin ah, sababtoo ah dhulka guriga oo dhan maqaarka oo qadhaadhaya sanado badan oo dhaqdhaqaaqa lacagta la dhaqay. Waxay bixiyaan daryeelka dayactirka kadibna lagu daaweeyo laser ama kiimiko iyo farsamooyin farsamo.
ka dibna waxay Hillaaca farsamooyin dheeraad ah invasive iyo natiijooyin badan oo joogto ah, gaar ahaan la duray xididka of xal mélanobloquantes, tusaale ahaan, hiddo, antioxidant awood leh (marka hore in lagu daweeyo cudurka Parkinson). Farsamada Tani waa arin argagax iyo aadka u halista ah (dheefshiidka iyo hababka dareemayaasha).
Inta u dhaxaysa labadan xagood: waaxyaha ka mid ah qaybaha qurxinta.
dadkii badnaa ka mid ah noocyada Afrika, African American, ama afropéennes iibiso isku qurxiyo sida saabuunta, kareemada jirka iyo serums wejiga, cunto supplements ... Marka ugu fiican, wax yar cadeeyo iyo hantida in ciyaaro badan oo ku saabsan dib u cusboonaysiinta unugyada iyo iftiinka. Ugu xumaa, waxyeello aalladda kareemada in baabbi'in dadka isticmaala maqaarka.
Noocyada guud ee guud (sida L'Oreal) way ka taxaddaraan aaggan. Waqtiga saxda ah ee siyaasadeed iyo "quruxda caalamiga ah", waa arrin anshax ahaan u adag in lagu galo aagga jinsiyadda ee lacagta la dhaqay. Waxaan ka hadli doonnaa isugeyn dheeraad ah oo daryeel ah "niyadjab" ka badan "xoqan".
Laakiinse, sida is-megdeeye ama lagu buufiyo-tan (Roob is-warshadaynta) midabka iyo inuu dubka aan waxyeellada daran ee qorraxda, suuqa this weyn, kuwaas oo laga helay wax ku ool ah, formula daryeel degdeg ah u jeeda, si cajiib ah, la heli karo oo ammaan ah waxay heli doontaa balaayiin doolar. !
Habka seddexaad: kalsooni iyo dareen caadi ah.
Dhibaatooyinkaas oo dhan, habka ugu fiican ayaa weli ahmiyadda saaraya waxbarashada. Waxbarashada wajahaysa halista lacagta la dhaqay. Waxbarashada khatarta ah ee ka soo horjeeda warshadaha nadiifiska ah ama ganacsiga oo muujiya. Iyo wax walba ka sarreeya, waxbarashaddakalsooni darro. Si aad u jeclaato mid ahaanteed waa mid ka mid ah iyo in la daryeelo mid ka mid ah maqaarka si loo ilaaliyo ilaa inta suurto gal ah.
Ugu dambeyntii, talooyin fudud oo loogu talagalay maqaarka quruxda badan: nadiifinta maalin walba, unugyada dhiman ee maskaxda joogta ah, si joogto ah uga ilaaliya qorraxda, qoryaha, sublimaadka tayada dabiiciga ah ee dabiiciga ah.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri blogda: Panafrican Beauty
Asalka Afrika ee Baaqa Caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha: Jaangooyada 'Mandé Charter'
Kitaabka Quduuska ah (PDF)
Diinta Isis waa diinta asalka ee diinta masiixiga
Haa, waan awoodaa - Louise Hay (Audio)
Magaca Ilaahay ee Afrika